Nordea မာစတာဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ (ဥရောပခရီးစဉ်)
ဥရောပခရီးစဉ်အပေါ် Nordea မာစတာဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ
အတိတ် Champs အပေါင်းဆွီဒင်အတွက် tourney များအတွက်ပျော်စရာအချက်အလက်များနဲ့ကိန်းဂဏန်းများ
(စကင်ဒီနေးမာစတာအဖြစ်င်း၏သမိုင်းတာမှတဆင့်လူသိများခဲ့သော) ကို Nordea မာစတာဆွီဒင်အတွက်နှစ်စဉ်ကစားသောဂေါက်သီးပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ 1991 Nordea တစ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီအတွက်၎င်း၏ပွဲဦးထွက် 2010 ခုနှစ်မှာစတင်ခေါင်းစဉ်စပွန်ဆာဖြစ်လာခဲ့ကတည်းက Nordea မာစတာဥရောပခရီးစဉ်အချိန်ဇယား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
ဘယ်အချိန်မှာ: သြဂုတ်လ 16-19
အဘယ်မှာ: ဂို, ဆွီဒင်အတွက်တောင်တန်းများဂေါက်ကလပ်
2017 Nordea မာစတာ
နှစ်ဆယ်နှစ်အရွယ်အီတလီ Renato Paratore ဥရောပခရီးစဉ်အပေါ်သူ၏ပထမဦးဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအနိုင်ရဘို့အောင်ခြင်းကိုယူ။
Paratore 2014 ခုနှစ်လိုလားသူလှည့်နဲ့သူ့သာယခင်လိုလားသူအောင်ပွဲ 2014 အီတလီအမျိုးသားချန်ပီယံရှစ်မှာခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Nordea မာစတာမှာသူ 11-အောက်တွင် 282, အပြေးသမား-up, မဿဲ Fitzpatrick နဲ့ Chris Wood ကထက်ပိုကောင်းတဲ့တစျခုလေဖြတ်မှာကိုလက်စသတ်။
2016 Nordea မာစတာ
မဿဲ Fitzpatrick ပြေးသမား-up, Lasse Jensen ကျော်သုံးခြင်းဖြင့်အနိုင်ရခြင်း, 2016 Nordea မာစတာအတွက်အောင်ပွဲမှ cruised ။ က Nicolas Colsaerts ကျောတတိယနေရာအတွက်အခြားလေဖြတ်ခဲ့ပေမယ့် Fitzpatrick နောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည်ရဲ့ start မှာငါးခုအားဖြင့်ခြောက်လနှင့် Colsaerts အားဖြင့် Jensen ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာဥရောပခရီးစဉ်အပေါ် Fitzpatrick ရဲ့ဒုတိယအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
သွင်းယူ, 18 တွင်း: 61 - Fred သည်စုံတွဲများ , 1991
အမှတ်ပေး, 72 တွင်း: 262 - မာကု Hensby, 2005
အောင်ပွဲ:3- Colin Montgomery နှင့် Lee က Westwood
အဆိုပါ Nordea မာစတာဂေါက်ကွင်း
2014-15 ခုနှစ်, Nordea မာစတာရုံမာလ်မိုမြို့တွင်ပြင်ပ PGA ဆွီဒင်အမျိုးသားတစ်ဦးဂေါက်သီးအပန်းဖြေစခန်းနှင့်ကလပ်မှာကစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်ကမျိုးစုံသင်တန်းများနှစ်ပေါင်းများစွာပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့သည်။
2010-13 ကနေ site ကို BRO, စတော့ဟုမ်းမြို့ရဲ့ဆင်ခြေဖုံးမှာ BRO Hof Slott ဂေါက်ကလပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခင်အိမ်ရှင်သင်တန်းများအကြားတွင်အများစုမှာမကြာခဏမာလ်မိုမြို့တွင်အတွက် Barseback ဂေါက် & Country Club ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းလှည့်ပြန်လည်စတင်အဖြစ် 2016 IIN, ပြိုင်ပွဲ, BRO Hof Slott ရန်နှင့် 2017 ခုနှစ် Barseback သို့ပြန်သွား၏။
Nordea မာစတာအချက်အလက်, ကိန်းဂဏန်းများနှင့်အသေးအဖွဲ
အဆိုပါပြိုင်ပွဲနှစ်ခုတည်ဆဲဆွီဒင်ပြိုင်ပွဲများ၏ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းမှတဆင့် 1991 ခုနှစ်မှာဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စကင်ဒီနေးလုပ်ငန်းပွင့်လင်းခြင်းနှင့် PLM ပွင့်လင်းစစ်ဆင်ရေးပေါင်းစပ်နှင့်စကင်ဒီနေးမာစတာအဖြစ်ပေါင်းစည်း၏ထွက်လာ၏။
Colin Montgomery နှင့် Lee က Westwood သုံးဦးချင်းစီနှင့်အတူပါဆုံးကိုအနိုင်ပေးရှိသည်။ Monty 1991 ခုနှစ်ပွဲဦးစကင်ဒီနေးမာစတာအနိုင်ရနှင့် 1999 ခုနှစ်တွင်အောင်ပွဲကဆက်ပြောသည်နှင့် 2001 Westwood ပထမဦးဆုံး 2000 နှင့် 2012 ခုနှစ်နောက်တဖန် 1996 ခုနှစ်တွင်အနိုင်ရနှင့်။
ဥရောပခရီးစဉ်အပေါ် Graeme McDowell ၏ပထမဆုံးအနိုင်ရရှိ 2002 စကင်ဒီနေးမာစတာမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ McDowell နေဆဲအသက်အငယ်ဆုံးအနိုင်ရသူများအတွက် tourney စံချိန်ရရှိထားသူ; သူသည်မိမိအ 23 မွေးနေ့လွန်ခဲ့တဲ့ငါးရက်နေ၏။
(Donald ထားပြီးအပေါ်အနိုင်ရပြီးမှကြောင့်နှစ်နှစ်ခဲ့ပေမယ့်, Luke Donald ရဲ့ပထမဆုံးဥရောပခရီးစဉ်အနိုင်ရရှိကိုလည်း 2004 ခုနှစ်, ဒီပြိုင်ပွဲအတွက်ဖြစ်ပျက် PGA Tour ) ။
Jesper Parnevik, 1995 ခုနှစ်, ဒီပြိုင်ပွဲကိုအနိုင်ရဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးဆွီဒင်နိုင်ငံသားများဖြစ်ခဲ့သည်, သူသည် 1998 ခုနှစ်နောက်တဖန်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
2013 ခုနှစ်ပြိုင်ပွဲမှာအင်ဒရူး Dodt နှစ်ခုသွင်းယူ တွင်း-In-One က Round2မှာ 65 မှလမ်းကြောင်း en, တူညီတဲ့ပတ်ပတ်လည်၌တည်၏။
အဆိုပါ Nordea မာစတာပြိုင်ပွဲဆုရရှိသူ
ကကစားခဲ့အချိန် (ကို p-အနိုင်ရ PLAYOFF) မှာပြိုင်ပွဲ၏အမည်နှင့်အတူတစ်နှစ်နေဖြင့်စာရင်းအတိတ်ချန်ပီယံ:
2016 - မဿဲ Fitzpatrick, 272
2015 - အဲလက်စ် Noren, 276
2012 - Lee က Westwood, 269
2011 - အလက်ဇန္ဒား Noren, 273
2010 - ရစ်ချတ်အက်စ်
2009 - ရီကာဒို Gonzalez, 282
2008 - ပတေရုသ Hanson, 271
2007 ခုနှစ် - Mikko Ilonen, 274
2006 - မာ့ခ် Warren-p, 278
2005 - မာကု Hensby-p, 262
2004 - လုကာ Donald, 272
Scandic Carlsberg စကင်ဒီနေးမာစတာ
2003 - အာဒံကိုဖြစ်သူ Scott, 277
2001 - Colin Montgomery, 274
2000 - Lee က Westwood, 270
1999 - Colin Montgomery, 268
1996 - Lee က Westwood-p, 281
1994 - ဗီဂျေး Singh က , 268
1993 - ပတေရုသ Baker-p, 278
1992 - နစ်ခ် Faldo , 277
1991 - Colin Montgomery, 270
ဂေါက်ကွင်း၌ 'ပွင့်လင်း Rota' '
တစ်နှစ်တာဆုချီးမြှင့် Winners ၏ LPGA Player ကို
PGA Tour အပေါ်နိမ့်ဆုံး 72-Hole လေဖြတ်စုစုပေါင်းအဘို့စံချိန်
နှုတ်ကပတ်တော် "ဂျူး" ရန်ကဘာလဲရည်ညွှန်းကိုးကားပါသလား?
အင်္ဂလိပ်သင်ယူသူအဘို့အ Phrasal ကြိယာ '' မျှော် ''
အဆိုပါ Ronin အဘယျသို့သလော
ရှင်ပေါလု McCartney သေ Is စုံစမ်းဒါက Beatles အယ်လ်ဘမ်သဲလွန်စ
အဲလစ်ဇဘက် Proctor က
13 လက်နက် Caterpillar
'' လူဟောင်းနှင့်ပင်လယ် '' ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Wisconsin ပြည်နယ်-Milwaukee အဆင့်လက်ခံရေးတက္ကသိုလ်
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုလွှဲမရှောင်သာဒီရာစု, တွင် NSF လေ့လာမှုရှာပြီး
ဂျာမန်အားလပ်ရက်များအတွက် Go ဘယ်မှာ
အဘယ်အရာကိုပထမဦးစွာဒီဂရီ Reiki အတန်း မှစ. မျှော်လင့်ရန်
Imagecreatetruecolor () PHP ကိုရာထူးအမည်